トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Indlela ye credit esijikelezayo yi
I-credit olujikelezayo, igama elisemthethweni kuthiwa olujikelezayo, ligama elithetha ukuhlawula njalo. Ngokubanzi, lenzelwe ukuba ahlawule isixa ukuba uzimisele nyanga, kwanokuba ukuthenga iimpahla zexabiso, yinkqubo leyo eza kugqitywa ekuphumeni kuphela uzihlawule nyanga zonke-mali ethile. kunokuba kwezinto
kukuba ukuhlawula zonke ngaxeshanye, ngendlela ukuhlawula izihlandlo eziliqela abathintela imali ehlawulwa ngenyanga isixa esithile, ukuba uthenga le mveliso, umzekelo, 100,000 yen, imali iseti ngenyanga r ajikelezayo credit kwimeko 10,000 yen, inqununu kodwa zingahlawulwa izihlandlo ezili-10, inqununu kunye nenzala ethe ngqo olujikelezayo credit kunye ixesha yokuhlawula nenzala yonyaka umyinge wenzala ka-10% inzala iya kuba kweenyanga ezili-11, isixa sentlawulo iya kuba 107.497 yen . Xa credit olujikelezayo akusafuneki ukuba ahlawule 100,000 yen ngexesha, kodwa ke indlela yokubhatala lokuba kufuneka inzala.
le ndlela yokuhlawula, kukho ukongeza ndlela kwakhona inqununu kwaye iflethi-umyinge wenzala olujikelezayo ngetyala, umdla elongezelelweyo ngethuba lokufumana intlawulo ziya kwahluka. scheme intlawulo igqitywa yinkampani khadi, kufuneka ukuba ukhumbule xa zikhona. Ngokubanzi, oko kuxhomekeke inqununu ezimcaba-rate olujikelezayo yeentengo zemboleko xa yentengo, kwimeko ukulondoloza ngayo ngetyala esijikelezayo kukho ezininzi kuba inqununu kwaye iflethi-wenzala ajikelezayo ngetyala.
indlela inqununu ethe ngqo ribonucleic yindlela ukuba ahlawule isixa-mali ezifunyenwe ngokudibanisa umdla kwinqununu. Ngokomzekelo, ngonyaka umyinge wenzala ikhontrakthi 15%, xa uthenga iseti iimpahla 100,000 yen intlawulo yenyanga yen 10,000, 10,000, nto leyo ngolokuqala enyangeni leyo idityaniswe 1250 yen of yen 10,000 kunye umdla lwenqununu uhlawule 1250 yen. Emva koko, inzala iya kuqhubeka ukunciphisa 1125 yen, kwaye 999 yen kancinane kancinane. Iinyanga 10 yokugqibela ukugqiba intlawulo ithathwa yen 10124. Imali iimpahla ezithengiweyo, bahlulwe imali yokurhoxa sele imisiwe, oko waphawulwa ngezinto eziliqela iintlawulo ezilinganayo.
Yintoni enye omele ngangenani kwaye iflethi-umyinge wenzala olujikelezayo ngetyala, nantsi indlela ahlawule isixa esithile semali, kubandakanywa inzala. Xa inqununu ezimcaba-rate olujikelezayo ngetyala iya kuhlawula ngenyanga isixa kunye nenzala kwinqununu, kodwa oku kuya kuhlawula isixa esiqingqiweyo, kubandakanywa inzala . Umzekelo, ukuba uthenga 100,000 iimpahla yen, ngolokuqala enyangeni kuquka 1250 yen, 8750 yen kunye umdla lwenqununu yen 10,000.
Ngenxa yesi sizathu, inani iintlawulo, isixa impahla, kuya kuba ngaphezu inani lamaxesha bahlulwe isixa debit ekuqaleni usethe. Xa uthenge iseti ku-100-000 iimpahla yen ku 10,000 yen nentlawulo yenyanga, inani iintlawulo ziya kuba izihlandlo ezili-11. Eyokuqala ivela ngenyanga kwiinyanga ukuya ku-10 emva kokuba imali debit enyangeni leyo, kodwa yen 10,000, 11 xa kukho iinyanga, ukuhlala inqununu 7405 yen, 7497 yen, oko kongezwa 92 yen umdla itsaliwe apha kuwe.
Ukongeza, kukho indlela yokubhatala a, ezifana fixed-rate olujikelezayo scheme lwamatyala kunye nenkqubo slide lomncono, kodwa, kwiimeko ezininzi, iza kuba nenkqubo ribonucleic inqununu ethe ngqo okanye inqununu kwaye iflethi-wenzala ajikelezayo ngetyala. Inzala kwaye ngokungafaniyo uthetha ngokucophelela, kusemdleni ezivenkileni, imali ukuboleka iye yaba nomdla ngomdla. Kunqabile ukuba bahlule ngokungqongqo nabenzi card, inzala akuthethi nto ingqalelo umdla ngokulinganayo.
umdla zokuthengwa zomthetho azichaphazeleki phantsi Capital Subscription uMthetho kunye yeNzala Somqathango Law ngemali, isicelo loo Money nokuboleka Business Law. EJapan Credit Association, xa ukuzeyisa, ukuba imiswe ngokungqinelana kunye nomdla zokuthengwa ukuya amagatya omThetho Investment ukuya kwi-20%. Ri kuwe. Inzala kwaye ngokungafaniyo uthetha ngokucophelela, kusemdleni ezivenkileni, imali ukuboleka iye yaba nomdla ngomdla. Kunqabile ukuba bahlule ngokungqongqo nabenzi card, inzala akuthethi nto ingqalelo umdla ngokulinganayo.
umdla zokuthengwa zomthetho azichaphazeleki phantsi Capital Subscription uMthetho kunye yeNzala Somqathango Law ngemali, isicelo loo Money nokuboleka Business Law. EJapan Credit Association, xa ukuzeyisa, ukuba imiswe ngokungqinelana kunye nomdla zokuthengwa ukuya amagatya omThetho Investment ukuya kwi-20%.